जहाँ जेलबाट वीर्यको तस्करी गरेर बच्चा जन्माउन बाध्य छन् महिलाहरु, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
एजेन्सी। प्यालेस्टाइन र इजरायलको दुश्मनी ५० वर्षभन्दा पुरानो भइसक्यो । इजरायसमा बस्दै आएका प्यालेस्टाइनी महिलाहरुले अहिले पनि नरकसमान यातना भोगिरहेका छन् । उनीहरुका पति इजरायलको जेलमा कैद छन् र कैदीका पत्नीहरु यातना सहेर पनि इजरायलमै बस्दैछन् । यी पत्नीहरुले हार मानेका छैनन् । उनीहरु आफ्ना पतिकै शुक्रकिटबाट गर्भवती बनिरहेका छन् । उनीहरुका पतिको शुक्रकिट जेलबाट तस्करीको माध्यमले उनीहरुसम्म पुग्छ ।
अर्कोतर्फ इजरायली जेल अथोरिटीका प्रवक्ता सिवान विट्सम्यानका अनुसार उनीहरुले वीर्यको तस्करी गर्दै गर्दा केही कैदीलाई पक्राउ गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकअनुसार इजरायलका जेलमा ५ हजार ५ सय प्यालेस्टिनी छन् । इजरायलले प्यालेस्टिनीहरुलाई बिना कुनै मुद्दा वा सुनुवाइ जेलमा हाल्ने गरेको भन्दै ष्सको व्यापक आलोचना पनि भइरहन्छ ।